Ndepụta ndepụta: Otu esi emepụta ọdịnaya nke gụnyere | Martech Zone
Dịka ndị ahịa na-elekwasị anya na ọdịnaya na-eme ndị na-ege ntị, anyị na-ahụkarị onwe anyị ka anyị na-eche echiche ma na-eme mkpọsa na obere ìgwè nke ndị mmadụ yiri anyị. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa na-achọ ịhazi na itinye aka, ịdị iche na ozi anyị na-elegharakarị anya. Na, site na ileghara ọdịbendị, nwoke na nwanyị, mmasị mmekọahụ, na nkwarụ… ozi anyị pụtara tinye aka nwere ike n'ezie dịpụrụ adịpụ ndị na-adịghị ka anyị.
Inclusivity kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa na ozi ahịa ọ bụla. Na nwute, ụlọ ọrụ mgbasa ozi ka na-efu akara:
Womenmụ nwanyị bụ 51% nke ọnụọgụ mana naanị 40% nke mgbasa ozi na-eduga.
Ndị omenala dị iche iche bụ 39% nke ndị bi na mana 22% nke mgbasa ozi na-eduga.
20% nke ndị America nọ n'agbata 18-34 na-akọwa dị ka LBGTQ mana naanị mejupụtara 9% nke ndị na-achịkwa oge mbụ.
13% nke ndị America nwere nkwarụ mana naanị 2% nke ndị na-achịkwa oge mbụ nwere nkwarụ.
Site na itinye uche na ntinye, usoro mgbasa ozi nwere ike inye aka gbochie echiche dị iche iche ma nyere aka belata ajọ echiche.
Iha - ebumnuche iji kwalite ịkwụwa aka ọtọ mana ọ nwere ike rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla amalite site n'otu ebe ma chọọ enyemaka otu.
Equity - na-enye onye ọ bụla ihe ọ bụla ha chọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma ebe nha anya na-emeso onye ọ bụla otu.
Arụ ọrụ - ọdịdị nke njikọta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka agbụrụ, klaasị, na okike ka ha na-emetụta mmadụ ma ọ bụ otu onye e nyere, dị ka imepụta usoro njikọta nke ibe nke ịkpa oke ma ọ bụ ọghọm.
Token - omume nke ime naanị ihe atụ iji tinye aka nke ndị na-akọwaghị akwụkwọ, karịsịa site na ịnakọta ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị a na-akọwaghị iji kpụọ ọdịdị nke nha anya.
Amaghi ihe ozo - akparamagwa ma ọ bụ nkwenye dị iche iche na-emetụta nghọta anyị, omume anyị, na mkpebi anyị n'amaghị ama.
a ozi sitere na Youtube na-enye ndepụta nyocha zuru ezu nke ị nwere ike iji ya na ndị ọrụ okike ọ bụla iji hụ na itinye aka bụ onye ọkwọ ụgbọ ala na atụmatụ, ogbugbu, na iche ndị na-ege ntị nke ọdịnaya ị na-eke. A bụ ihe a na-agba ọsọ nke ndenye ego… nke m gbanwetụrụ iji maka nzukọ ọ bụla maka ọdịnaya ọ bụla… ọ bụghị naanị vidiyo:
Ọdịnaya: Olee isiokwu ndị metụtara na olee echiche ndị gụnyere?
Maka ọrụ m nwere ugbu a, ị chọọla echiche dị iche iche, ọkachasị ndị dị iche na nke gị?
Ihe ọdịnaya gị ọ na-arụ iji dozie ma ọ bụ wepụ echiche na-enweghị isi banyere otu ndị ahapụrụ iche ma nyere ndị na-ege ntị aka ile ndị ọzọ anya na mgbagwoju anya na ọmịiko?
Ihe ọdịnaya gị (ọkachasị akụkọ, akụkọ ihe mere eme, na sayensị) na-enye olu ọtụtụ echiche na ọdịbendị?
Onscreen: Gịnị ka ndị mmadụ na-ahụ ma ha leta m?
Enwere ndịiche n'ụdị m? Ndi okachamara na ndi ndu echiche sitere na onodu di iche-iche tinyere otutu ihe eji amata (okike, agburu, agburu, ikike, wdg) egosiputara na ọdịnayam?
N’etiti ọdịnaya iri ikpeazụ m gara aga, enwere ndịiche n’etiti olu ndị nọchiri anya ya?
Ọ bụrụ na m na-eme ihe ngosi ma ọ bụ ihe atụ, hà na-egosipụta ụcha akpụkpọ ahụ́ dị iche iche, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị?
Enwere ndịiche dị n'etiti olu na-akọwa ọdịnaya m?
Njikọ aka: Kedu ka m ga esi tinye ma kwado ndị okike ndị ọzọ?
Maka mmekorita na oru ohuru, m na-ele anya na ndi di iche iche di iche-iche di iche-iche, ma a na-echebara ndi mmadu anya?
Ana m ewere ohere iji mee ka ikpo okwu m dị elu ma bulie ma kwado ndị okike sitere na mpaghara a na-akọwaghị?
M na-akuziri onwe m banyere echiche ana emekpa site na itinye obodo / ọdịnaya di iche-iche?
Kedu otu nzukọ m si arụ ọrụ iji zụlite olu dị iche iche ma nye ndị na-ekwusara ya ozi ike / mmetụta?
Kedu otu nzukọ m siri zere tokenism? Ànyị na-esonye ndị ọkachamara na ndị nkwukọrịta sitere na ndabere a na-akọwaghị akụkọ maka ohere gafere karịa ọdịnaya metụtara ọdịnaya dịgasị iche iche?
Kedu ka mmefu ego na itinye ego na-egosi itinye uche na ntinye na ntinye?
Ndị na-ege ntị: Kedu ka m si eche banyere ndị na-ege ntị mgbe ha na-eme ọdịnaya?
Kedu ndị bụ ndị a chọrọ ka ha gee ntị? Enwere m echiche ịmepụta ọdịnaya m iji chọpụta ma soro ndị na-ege ntị dịgasị iche?
Ọ bụrụ na ọdịnaya m gụnyere isiokwu metụtara ọdịbendị na-adịghị mma megide ụfọdụ ndị ọzọ, m na-enye ọnọdụ ndị nwere ike ịnabata ọtụtụ ndị mmadụ?
Mgbe m na-eme nyocha ndị ọrụ, ụlọ ọrụ m ọ na-ahụ na echiche dị iche iche na-achọ ma tinye ya?
Ndị na-emepụta ọdịnaya: isnye bụ onye otu m?
Enwere ndịiche dị iche n'etiti ndị otu na-arụ ọrụ ọdịnaya m?
Ndi onu ogugu ndi otu m na egosiputa onu ogugu ndi mmadu, obughi nani ndi na-ege ugbu a?
Ana m eme ndị ọkachamara ma na-eche ndị isi sitere na nzụlite dịgasị iche iche na ọtụtụ akụkụ nke njirimara (okike, agbụrụ ma ọ bụ agbụrụ, ikike, wdg) dị ka ndị na-ahụ maka ọrụ m?
Tags: di iche icheiche iche ọnụ ọgụgụnhahara nhatanhaNsonyensonyeinclusivity ọnụ ọgụgụinfographicozigbo ozigbontụgharị ucheakara akaamaghi ihe ozo